सडकको धुलोले हैरान पारे पछि स्थानीयद्धारा बाटो बन्द. – Sabaikoaawaj.com
सडकको धुलोले हैरान पारे पछि स्थानीयद्धारा बाटो बन्द.
शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०७४ 9:35:41 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, २६ जेठ /लामो समय देखि सडक निमार्ण हुदा सडकको धुलोले घरमा बस्न सक्ने अबस्था नभएपछि पोखराको जिरो विन्ध्यावासिनी सडक खण्डका स्थानीय आजित भएका छन् । निर्माणधिन सडकबाट उडेको धुलो घर र पसल भित्र पसेर बस्न नसक्ने भएपछि उनीहरुले सडकनै बन्द गर्न निस्किए ।
‘रोडको छेउमा घर छ । यो बाटो समयमा नबन्दा धेरै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । धुलो उडेर वारीको पारी मान्छे देख्न सक्ने अबस्था हुन्न’, एक स्थानीयले भने ‘खाने कुरामा धुलो, घर भित्र धुलो, धुलोका कारण कतिपय बिरामी परेका छन् ।’ धुलो नियन्त्रण गरी छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सडक विभाग र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक आग्रह गर्दापनि सुनुवाई नभएको स्थानीयले बताए ।
सडक विस्तारको लागि हेटौडाको रमण मृत सञ्जिवनी कम्पनीले २०७१ असार ३० गते निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७३ असार ३० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण म्याद थप गरी आगामी असार मसान्त भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सडक खण्ड विस्तारका लागि कुल १३ करोढ ३९ लाखमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तर कति स्थानीयले निर्माण पक्षले रकम बढाउन नाटक गरेको समेत आरोप लगाए ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०७४ 9:35:41 PM